आज बुधवार श्रीकृष्णको पुजा अर्चना गरे मिल्नेछ यस्तो सफलता! श्रीकृष्ण कि जय! – Namaste Dainik
May 13, 2020 May 13, 2020 NamastedainikLeaveaComment on आज बुधवार श्रीकृष्णको पुजा अर्चना गरे मिल्नेछ यस्तो सफलता! श्रीकृष्ण कि जय!
हिन्दु धर्ममा हरेक दिन विभिन्न देवी देवताहरुको पूजा गर्ने गरिन्छ । सबै दिनको उत्तिकै महत्व छ । विशेष व्रत र उपवास बाहेक अधिकांश हिन्दु धर्मावलम्बीहरूले हप्ताको हरेक दिन बारअनुसार कुनै न कुनै देवी–देवताको पूजा गरि व्रत बस्ने गर्दछन्। बुधवार भगवान श्रीकृणको विशेष दिन हो । ‘बुध’ग्रहको लागि समर्पित बार नै बुधबार हो। यस दिन विशेष गरी विथाल–देव(कृष्णको अवतार)को पूजा गरिन्छ।
पूजा गर्दा तुलसीको पात प्रयोग गर्नुपर्दछ। कुनै नयाँ काम थालनीको लागि बुधबार अति नै शुभ मानिन्छ। साथै यस दिन कृष्ण भगवानको व्रत बस्नेले आफूले चाहेको फल पाउने विश्वास गरिन्छ। यस दिन गरिने केही कर्मले जीवनभर राम्रो फल मिल्ने धार्मिक विश्वास रहेको छ ।
– हिन्दु धर्ममा गाईलाई पूजनीय मानिन्छ। विशेषगरी बुधबार गाईलाई हरियो घाँस दिने व्यक्तिलाई सबै देवी९देवताको कृपा हुने गर्छ।
बुधबारको व्रत बुधग्रहको कुप्रभावको शान्तिकामनाका निम्ति एवं धन,बुद्धि,विद्या र व्यापार वृद्धिका लागि पालना गर्ने गरिन्छ । यो व्रत विशाखा नक्षत्रयुक्त बुधबारबाट सुरु गर्नुपर्दछ । यसलाई कमसेकम ७ वटा बुधबारसम्म लिएर मात्र उद्यापन गर्नु पर्दछ । व्रत सुरु गर्ने दिन बिहान स्नान गरी शुद्ध भई हरियो कपडा लगाएर भगवानसामु विष्णु नाम जप गर्नु पर्दछ।‘ॐ बुधाय नमः’मन्त्रलाई जप गर्नु पर्दछ। यो व्रतमा पनि एकछाक नुन बार्नुपर्दछ ।
भोजनमा घ्यू,मुंगको दाल अथवा मुंगको दालबाट बनेका परिकार ग्रहण गर्नु पर्दछ । दान गर्दा पनि यिनै चीजहरू दान गर्नुपर्दछ । अन्तिम बुधबारचाहिँ दही,घ्यूले हवन गरी हरियो कपडा दान गर्नु पर्दछ। गाई छ भने गाईलाई सेवा गर्ने गर्नु पर्दछ। एक पटकको कुरा हो एउटा मानिस आफ्नी पत्नी लिई आउन ससुराल गयो । त्यहाँ केही दिन बिताएपछि उसले सासु(ससुरासित विदा माग्यो)। तर सबैले आज बुधवार हो,आज यात्रा गर्नु हुदैन भने ।
निरन्तर सेवा मा खटिरहने भक्तपुरकि २५ वर्षीया नर्समा कोरोना पुष्टि,कोरोना संक्रमित नर्सको संख्या २ पुग्यो।
भक्तजनलाई रुद्राक्षको माला वितरण
नेपालमै छ एउटा यस्तो मन्दिर जहा दर्शन गर्न जॉदा ऑफै घन्टि बज्छ ! हेर्नुहोस (भिडियो सहित)……